XASAASI + DAAWO VIDEO: Mid ka mid ah hoggaanka Xisbiyada dalka ka jira oo Karbaashay Xasan Sheekh, Cosoble iyo Madasha Shariif Sh. Axmed ! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XASAASI + DAAWO VIDEO: Mid ka mid ah hoggaanka Xisbiyada dalka ka...
Muqdisho (Halqaran.com) – Cabdullaahi Sheekh Xasan oo mid ka mid ah hoggaanka Xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa maanta kulan muhiim ah magaalada Muqdisho kula yeeshay qaar ka mid ah xisbiyada, isagoona ka hadlay arrimo kala duwan iyo xaaladda siyaadda uu dalka marayo.
Cabdullaahi Sheekh Xasan, ayaa sheegaya in xukuumadda Soomaaliya ku taageerayaan wixii wanaagsan oo ay qabatay oo ay ugu horreyso kordhinta mushaaraadka ciidamada.
Sidoo kale, wuxuu xusay, in aysan marnaba ciidamada qaranka shaqo ku laheyn wax siyaasad ah, isagoona wax laga xumaado ku tilmaamay qaar ka mid ah xisbiyadda madasha sameystay oo dhawaan faragelin toos ah ku sameeyay arrimaha ciidamada.
DAAWO MUUQAAL XASAASI: ‘‘Puntland waa in la qabtaa Shirweyne dib u saxid ah, si qaladaadka loo saxo‘‘! waxaa yiri
Cabdullaahi Sheekh Xasan
hoggaamiye xisbi siyaasadeed
axmed November 10, 2019 At 19:55
Madasha iyo ragaan madaxda soo noqdey, waqtigoodii wey qaateen, maxaa dhibaya, hadey xil hor leh rabaan ,mey sugaan doorasho. mida kale waan aragney maamulkoodii, iyo heerka ay na gaarsiiyeen. hadda ma waxey rabaan, dowlad la,aan iyo afargeesoodii 90 ki in ay noo celiyaan, war wax qabta malaha miyaa. war cidaan sow isma dhaanto.